February 16th, 2014 विचार-दृष्टिकोण No Comments »
जनमुखी सरकारको आवश्यकता
हामीलाई थाहा छ– हिजो चुनावअघि उम्मेदवारहरु जनताको घरदैलोमा गएर भोट माग्दा एक थान संविधान दिने मात्रै कुरा गरेका छैनन् । त्योभन्दा बढी जनतालाई विकासे सुविधा दिने बाचा गरेका छन् । जनतालाई पर्याप्त विकाससँग जोड्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । सामान्य हिसाबले हेर्दा आम मतदाताका लागि राज्यको शासन प्रणाली, संरचना, सत्ता र शक्तिको खेल यी सबै कुरा गौण हुन्छन् । र, स्थानीय विकास, समृद्धि, राज्यको स्रोत–साधनहरुको न्यायपूर्ण वितरणजस्ता मुद्धाहरु नै महत्वपूर्ण हुन्छन् । अतः यस पटकको चुनावमा पनि त्यही देखियो, जुन हिजो देखिन्थ्यो । यसपटक थोरै मतदाताले मात्रै संविधानको सर्तमा मतदान गरेका छन् भने बहुसंख्यक मतदाताले स्यानीय विकास निर्माणका मुद्धालाई सर्त बनाउँदै मतदान गरेका छन् । यो कुरा जितेर जानेहरुले राम्ररी बुझेकै हुनुपर्छ ।
February 8th, 2014 गजल 1 Comment »
यौटै प्रश्न ….
यौटै प्रश्न अक्सर सोध्नेहरु छन्,
किन भइस् पत्थर ? सोध्नेहरु छन् ।
छोडेर साथ यहाँ आधी बाटोमै,
जिन्दगीको सफर सोध्नेहरु छन् ।
February 4th, 2014 विचार-दृष्टिकोण No Comments »
दोस्रो संविधानसभाका अप्ठेराहरु
पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभाको वैधानिक कार्यकाल दुई वर्षको थियो । अर्थात्, दुई वर्षभित्रमा संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने जनादेश संविधानसभासँग थियो । तर, वैधानिक समयमा संविधानसभाले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न नसक्दा पटक–पटक गरी चार पटक समय थपियो । चारै वटा सरकार फेरिए । तैपनि, परिणाम सुखद् निस्किएन । जनप्रतिनिधीहरुको सर्वोच्च संस्था संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले उपयोग गर्न सकेनन् । अन्ततः बिजोगपूर्ण अवस्थाबाट संविधानसभाको विघटन भयो । कारण, शान्ति र संविधानको कार्यभार कोही, कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन । मूल नेतृत्व सत्तास्वर्गमै अल्मलियो । जनताको महान बलिदान र संघर्षबाट आर्जेको संविधानसभालाई राजनीतिक नेतृत्वले पैसा, शक्ति र सत्तासँग साट्यो । हिजोको यस्तो दृष्टान्त आज हाम्रा सामु छ ।
अर्को ‘आर्ट ग्यालरी’
०६४ को संविधानसभाको पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचनलाई ‘एक जुगमा एकपल्ट आउने एक दिन’ भनेर भनेका थियौं हामीले । तर दूर्भाग्य, भइदियो ठिक उल्टो । अर्थात्, केवल पाँच वर्षकै अन्तरमा यही जुगमा एउटै संविधानसभाको निर्वाचनलाई दोस्रोे पटक भोग ग¥यौं हामीले । जहाँ हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वले विघटन भइसकेको संविधानसभाको औचित्यलाई संविधानसभा पटक–पटक असफल भएका केही युरोपिएन मुलुकहरुको उदाहरणको कार्ड देखाउँदै पुष्टि गरिदिए । र, हामी सामेल भइदियौं दोस्रो संविधानसभाको ‘महायज्ञ’मा । संविधानसभा निर्वाचन भाग–२ को नाममा हामीले खसालेको भोटले मुलुकको राजनीतिलाई लयमा फर्काउनका लागि जति काम गरेको छ, त्योभन्दा बढी विगतमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गरेको गल्ति र उनीहहरुको असफलतलाई ‘वैधानिकता’ दिने काम गरेको छ ।
February 2nd, 2014 पुस्तक-समीक्षा No Comments »
सरस्वतीका इन्द्रेणी कविता
१९औं शताब्दीका विश्वप्रसिद्ध अमेरिकन कवि टीएस् इलियले भनेका थिए– ‘कुनै एउटा पाठकले सडकमा कवितालाई टिपेर अथवा पत्रिकाका पाना काटेर आफ्नो डायरीमा कविता जतन गरेर राख्छ भने इतिहासको सबैभन्दा उत्तम कविता त्यही हो ।’
कवि संसारको सबैभन्दा सुन्दर मान्छे हो । कविताहरु संसारका सबैभन्दा सुन्दर वस्तुहरु हुन् । कविता मान्छेको स्रोत हो । जीवन सिक्नेहरु कविताबाटै सिक्छन् । युग चिन्नेहरु पनि कवितामा आउ“छन् । सत्यलाई हेर्नेहरु पनि कवितासम्म आइपुग्छन् एकपटक । इतिहास जसरी लेखिए पनि इतिहासले एकपटक कविता हेर्छ । उसले एकपटक कविलाई पनि हेर्छ । र, सलाम गर्छ । मान्छेहरुले जीवन जसरी भोगे पनि एकचोटी कवितामा आउ“छन् । सबैले कवितालाई चिन्न नसक्लान् तर कविताले सबैलाई चिनेको हुन्छ ।